Maxaan cunaa haddii ay ku dhacdo hypoglycemia? -Ka hadallada Sonkorowga-Sinocare
Maxaa la cunaa haddii ay ku dhacdo hypoglycemia?
Waqtiga: 2019-10-24 Hits: 425
Cunto noocee ah ayaa ah inaan doorano si dhakhso ah kordhinta sokorta dhiiga markay xanuunsato hypoglycemia? Cunnooyinka kaladuwan waxay leeyihiin tixraaca glycemic kala duwan. Cunnooyinka leh glycemic index sare waxay sababaan in sonkorta dhiigu si dhakhso ah u kacdo. Waxaa ka mid ah, ugu sarreeya waa gulukoosta (glycemic index waa 100), waxa ku xiga waa rooti cad (88), malab (73), soodhicir soda (72), sonkor cad (65), mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka (62), casiirka oranji (57 ), shukulaato (49), Tufaax Juice (41) iyo Coca Cola (40).
Marka ay ku dhacdo hypoglycemia, kaliya ma cunno cunnada ay kujirto dufanka badan ama borotiinka (sida jalaatada). Sababtoo ah dufanka ayaa ka dhigi kara kaabaya caloosha oo hoos u dhigaya isla markaana hoos u dhigaya doorka karbohaydraytyada, kaas oo ka dhiga sonkorta dhiigu si dhakhso ah uma kici karto waqti gaaban, laakiin kicinta hypoglycemia waxay u horseedi doontaa bukaanka inay sii wadaan cunista cunno badan, taasoo keentay xakameynta adag ee gulukoosta dhiigga.
Waxay u baahan tahay taxadar in haddii dawooyinka hypoglycemic ee bukaanka ay ku jiraan α- glucosidase inhibitor (sida acarbose, Basen, iwm.), kuma daraan biyo sonkor ah oo cad, casiir khudradeed, buskud, caano la dubay iyo cuntooyin kale oo leh disaccharides ama istaarijiin. Sababtoo ah daawooyinkaani waxay carqalad ku noqon karaan karbohaydraytka gulukoos, isla markaana si dhakhso leh uma daaweyn karaan glucopenia. Markaa bukaanka kadib markuu qaato α- Gulukooska loo yaqaan 'glucosidase inhibitor' waa inuu doortaa kiniiniyada gulukooska ama biyaha gulukooska marka ay dhacdo hypoglycemia.
Marka bukaanka sonkorowga qaba sonkorta dhiigga ≤3.9mmol / L, waxay u baahan yihiin inay ku daraan gulukoos ama cunto ay ku jiraan sonkor. Dhiig yaraanta 'hypoglycemia' waa in ay u sameysaa daaweyn ku habboon iyadoo loo eegayo wacyiga iyo xaaladda gulukooska dhiigga. Marka sonkorta dhiigu ≤3.9mmol / L, haddii wacyi gelintiisa ay cadahay, wuxuu qaadan karaa 15-20 garaam oo ah karbohaydrayt (glucose ayaa la door bidaa); Sug illaa 15 daqiiqadood si aad u cabbirto sonkorta dhiigga, haddii sonkorta dhiiggu weli tahay≤3.9mmol / L, ka dibna cun 15 garaam oo gulukoos ah, cabir mar labaad gulukoosta dhiigga, si loo hubiyo inay ka gudubtay 3.9mmol / L. Haddii bukaanku ay qabaan khalkhal miyir-qabka, waa inaan wacnaa taleefanka degdegga ah ee isbitaalka si loogu daweeyo. 15 garaam oo karbohaydrayt ah ayaa loo rogi karaa cuntooyinka soo socda: 15 garaam oo gulukoos ah (ama isku mid ah sonkor cad, sonkorta bunni ah), 20 garaam oo malab ah, 200 ml oo liin soodhada casiirka ah (ama cadad la mid ah Cola, liin macaan) ), 50 garaam oo casiir liin ah, 25 garaam oo rooti ah (2/3 gogo 'go'ay), 20 garaam oo buskud (3 xabbo oo buskudka soodhada ah) iyo wixii la mid ah.
Bogga Hore: Maxay tahay inaan fiirogareyno isboortiga?
Bogga Dambe: Markaad sooman tahay heerka gulukooska dhiigga ayaa ka hooseeya kan caadiga ah ...